UJulian Richings kokuthi 'Noma yini kaJackson' kanye nokuba sengozini kokuBamba
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukuxoxisana: UJulian Richings ku-'Spare Parts ',' Anything for Jackson ', kanye nokuba sengozini kokuBamba
Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoAma-movie ama-HorrorIzingxoxo (i-movie)
by UKelly McNeely June 7, 2021
ebhalwe ngu UKelly McNeely June 7, 2021
Ungahle ungalazi igama lakhe, kepha uzobazi ubuso bakhe. UJulian Richings uyisisekelo sefilimu yohlobo oluthile nethelevishini, enezindima ku Okungokwemvelo, iCube, uMthakathi, Inganekwane yasemadolobheni, Indoda Yensimbi, Onkulunkulu BaseMelika, Isiteshi Zero, uHannibal, Ijik elingafanele, nezinye eziningi. Umlingisi waseBrithani (manje osehlala futhi esebenza eCanada) unomqondo oqinile womzimba awuletha kuyo yonke indima, ehlanganisa ingxenye ngayinye ngokugcwele futhi abanikeze umqondo wabo wama-gravitas. Ungumlingisi ohlaba umxhwele ogqama esigcawini ngasinye, kungakhathalekile ubukhulu bengxenye.
Ngisanda kuhlala phansi noRichings ukukhuluma naye ngokuqeqeshwa kwakhe njengomlingisi, kanye nezindima zakhe ku-reverse-exorcism hit Noma yini kaJackson kanye ne-punk rock gladiator showdown Izingxenye ezisele.
Noma yini kaJackson
UKelly McNeely: Ube nomsebenzi obanzi kangaka kwifilimu yohlobo nasethelevishini lapha eCanada. Uqale kanjani? Futhi udonswa ngokukhethekile ekusebenzeni ngohlobo?
UJulian Richings: Ngiqale kanjani… Ngicabanga ukuthi bengilokhu ngingumlingisi. Ngingumfowethu ophakathi nendawo, futhi nginabafowethu ababili - ohlangothini ngalunye lwami - futhi bengilokhu ngizizwa ngiyingane, yimina engingathanda… ngingahluka kumfowethu ngamunye, ngizohluka no wonke umuntu.
Nganginomfowethu osekhulile futhi owayenekhono elithile lokudala izindawo, waba ngumklami waseshashalazini, futhi wasebenzisa ukwakha izindawo egcekeni lethu. Futhi wayedinga umuntu ozogcwalisa lezo zindawo, njengomphathi wezindandatho esekisini lakhe, kanye nesipoki sezindlu zakhe zokuphamba nezinto, ngakho… qagela ukuthi ngubani owenze lokho. Futhi-ke ngihlale ngilingisa njalo, bengizizwa ngikhululekile impela uma ngilingisa.
Futhi ngandlela thile, ukulingisa kungenza ngikwazi ukuba yizo zonke izinhlobo zabalingiswa abeqisayo ebengingasoze ngibe khona empilweni yangempela. Njengokuthi, ngihlala ngiqaphela ukuthi ngijwayelekile futhi nginciphile kangakanani. Uyazi, abantu bayahamba, O, Nkulunkulu wami, udlala lowo mfana! NguKufa kusuka esingajwayelekile! Futhi ngiyathanda ukusho, Yebo, ngavunyelwa ukuba yilokho, kepha awufuni ngempela ukungazi ngaphandle kwama-movie. Ngakho-ke, oh, futhi kunezingxenye ezimbili embuzweni wakho! Uhlobo.
UKelly McNeely: Ingabe ukhangwa ikakhulukazi uhlobo?
UJulian Richings: Yebo, ngicabanga ukuthi kungokwemvelo. Ngicabanga ukuthi, uyazi, kukhule nje eminyakeni edlule, uhlobo lwezingxenye engizidlalile. Hhayi kangako emidlalweni yeshashalazi, ngakhulela kwezeshashalazi, ngaqeqeshwa kwezeshashalazi, ngalingisa kwezeshashalazi, ngase ngiphenduka kancane kancane ngaba ifilimu nethelevishini. Futhi ngenkathi ngenza imidlalo yaseshashalazini, ngaqala ukwenza ezentengiselwano ukwengeza umholo wami. Futhi izimakethe zonke zazivame ukwehluleka ukwenza okuthile, i-geeky, izinhlamvu eziyinqaba. Ngoba, uyazi, lapho wenza ezentengiselwano, bengingeyena ubaba wakudala, noma, uyazi, umfana obukeka kahle onamazinyo aphelele. Ngangihlala ngingumuntu ongajwayelekile, ongaziwa. Futhi lokho kungukungenakugwemeka kwifilimu nakuthelevishini, ngoba kuyindlela engokoqobo. Ngakho-ke uhlobo lwendima engiyidlalile bekungaphandle kwabangaphandle kanye nabafokazi nezinhlobo ezethusayo. Ngakho-ke kunguhlobo lwezinto eziphilayo.
Eshashalazini, ngibe nobubanzi obuningi, kepha ngamukela yonke into. Futhi ngihlala ngizama ukufaka izinto ezahlukahlukene kubo bonke abalingiswa engibadlalayo, ngakho-ke angibaxoshi njengabo, oh, leyo yindima eyethusayo. Njengokuthi uma kuyindima eyethusayo, ngizozama ukwethula ubuntu obuncane noma uma ngidlala i-Emperor embi, ngizozama ukujova ubungozi, uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini? Ngakho-ke, kimi, kufana nokuthi, angazi, akunakugwemeka, ngicabanga kanjalo.
UKelly McNeely: Futhi manje uma ukhuluma ngabalingiswa abakhohlakele, udlale izigelekeqe ku Izingxenye ezisele futhi muva nje ku- Ukuzijabulisa okunonya, nohlamvu oluyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ku Noma yini kaJackson… Hlobo luni lwezindima ezikuthokozisayo njengomdlali?
UJulian Richings: Azikho izindima eziningi engingahambi ngazo, oooh, lokho kuyathakazelisa. Anginawo umuzwa wobukhulu. Anginalwazi noma ubandlululo, ngithi, lokho akuyona ingxenye enkulu ngokwanele kimi. O, lokho kuncane kakhulu, noma lokho kuncane kakhulu. Ngithanda izindaba. Ngithanda ukuxoxa izindaba. Futhi ngiyathanda ukuba yingxenye yendaba. Futhi kwesinye isikhathi lokho kudinga okuthile okuncane futhi okukhulu. Futhi kwesinye isikhathi kuyinto esakazeka ku-arc enkulu.
Ngakho-ke ngikuthola kunzima ukuhlukanisa. Kufana nokuthi, uyazi, kukhona lawo maski akudala amele imidlalo yaseshashalazini. Kukhona imaski yokumamatheka yamahlaya, futhi kukhona imaski ekhanyayo yenhlekelele. Ngikuthola kunzima kakhulu ukwehlukanisa lezi zinto ezimbili, ngicabanga ukuthi ngemuva kwazo zonke izinhlekelele, kukhona amahlaya futhi okuphambene nalokho. Futhi izindima ezifanayo engizidlalayo. Ngakho-ke ngiyakuthanda ukukuxuba, ngikhululeke kakhulu ukuba yingxenye encane yendaba, futhi ngijabule ukuphatha indaba esemqoka. Ngakho-ke angithandi ukuhamba, kulungile, ifilimu elandelayo, ngifuna ukuba yilokhu noma lokho.
Ngicabanga ukuthi njengoba ngikhula, ngiyajabula ukuhlela ukucasula umbono womuntu wonke wokuthi izinhlamvu ezindala zenzani. Ngakho njengoba ngikhula, ngiyajabula ukukwenza dlala izinhlamvu eziyindida ezinamandla, ngoba esikweni lethu, sivame ukukuchitha ukuguga njengento okuthi, uyazi, ubhalelwe phansi. Ngakho-ke lokho kuyinto enhle engiqala ukuyamukela.
UKelly McNeely: Yebo, uyakubona impela lokho Noma yini kaJackson. Ngiyawuthanda lowomqondo wokuthi esikhundleni sokuthi, niyazi, lezi zingane zifunda kule ncwadi futhi zibiza amadimoni, yilezi zithandani ezindala, futhi kufanele zazi kangcono, kepha ziyakwenza noma kunjalo. Futhi ngiyakuthanda ngempela lokho.
Bengizibuza ukuthi ungakhuluma nje kancane ngobunzima bokuziphatha be Noma yini kaJackson, ngoba impela kuyindlela egqinsiwe yesenzo sokuthumba. Kunalo mqondo ophelele wokuthi uwenzela unkosikazi wakhe, uwenzela umndeni wakhe, uyazi ukuthi mhlawumbe akuyona into efanele ukwenziwa leyo. Kepha konke kwenziwa isenzo sothando.
UJulian Richings: Impela, uyishaya yazula. Ngicabanga ukuthi okuhle nokumangazayo ngale filimu ukuthi kungabantu ababili abazibophezele komunye nomunye, kodwa babelana ngosizi olubi nenhlekelele embi. Futhi ukuze badambise lolo sizi, babheke ekunikezaneni amandla, futhi izenzo abazithathayo impela, azixoleleki, kepha bakwenza egameni lothando, futhi bavikele omunye umuntu. Futhi ngezindlela eziningi, basuse umthwalo kude nabo. Futhi ngicabanga ukuthi leyo yindawo eyinkimbinkimbi ngempela futhi ethokozisayo yokuba ifilimu ihlale.
Manje, njengabalingisi, mina noSheila sisebenza ngokubambisana kahle, sengathi sinamakhemikhali amahle impela, futhi sidlale nje ubuqotho bobudlelwano phakathi kwabantu ababili. Futhi thina, ngiqagele, silethele ulwazi lwethu uqobo. Sobabili sinenhlanhla yokuba nobudlelwano besikhathi eside. Futhi ngakho-ke sizamile ukwethembeka mayelana namajaji kanye nokuphazamiseka kokuba nobuhlobo besikhathi eside, uyazi, kanye nalolu hlobo lwama-comedic bits angangena nakulo.
UKelly McNeely: Impela. Futhi kukhona, ukuthunjwa ku Izingxenye ezisele futhi, enohlobo lwayo lwesethi yobunzima kanye nesisusa esibi kakhulu.
UJulian Richings: Yebo, ngisho ukuthi, kusobala ukuthi ifilimu engaphambili, yokugaya, engathathi iziboshwa. Engikuthandayo ngakho, lokho okujova ngempela kulolo uhlobo lokubi lwe-punk. Kukhona uhlobo lokuqina okukhulu, futhi kunomqondo wokuthi abesifazane abajabuli nje ngokuba, uyazi, izinto ezenziwe ngezifiso. Uyazi, kufanele balwe nendlela yabo eya enkululekweni. Futhi kuluhlobo oluthile lokuthola amandla kuyo, kanye nedwala kanye ne-roll uhlobo lwentukuthelo. Futhi lokho kumnandi. Kwehluke kakhulu. Amandla ahluke kakhulu.
UKelly McNeely: I-vibe ehluke kakhulu phakathi kwamafilimu amabili. Manje, ngiyajabula ukuzwa ukhuluma kakhulu ngethiyetha. Ngabe ungakhuluma okuncane ngokuqeqeshwa kwakho nangemvelaphi yakho kwezeshashalazi futhi uma lokho kungenzeka kuhlobo lohlobo oluthile, kuze kufike ezinkingeni zangempela ozithola kulabo balingisi?
UJulian Richings: Yebo, kunjalo. Kube wusizo emsebenzini wami. Ngakho ngakhula futhi ngaqeqeshwa eNgilandi. Kepha ngakhula ngesikhathi lapho uhlelo lwesiNgisi Esidala, izinkampani zemidlalo yaseshashalazini zamasonto onke, nezindawo zemidlalo yaseshashalazini zazibola futhi asisafanelekile. Futhi-ke bekukhona uhlobo olusha lwegagasi lamathiyetha omphakathi lapho abantu bezonandisa ezindaweni ezingezona ezendabuko. Ngangidlala emapaki, ekugcineni kwesikebhe, emabhishi, emakhaya asebekhulile - umqondo kwakuwukuyisa yaseshashalazini kubantu.
Futhi-ke kwaba nomqondo wokuthi - ngawo-70s, eNgilandi - ukuthi uhlelo oludala lwalungasasebenzi, ngokufika kwethelevishini nama-movie, ukuthi inkundla yeshashalazi yendabuko kwakufanele iguquke. Ngakho-ke lapho ngangena khona emidlalweni yaseshashalazini, ulwazi lwami lweminyaka yokuqala lwalulapho, futhi ngabuye ngaziqeqesha njengomlingisi womzimba, hhayi njengezikole eziningi zemidlalo yaseBrithani, ezazazi kahle isikole esidala.
Ngangiqeqeshwe kakhulu ngendlela kaGrotowski. Wayengumphathi omkhulu wasePoland wangaleso sikhathi, owayekhuluma ngokwakha inkundla yemidlalo yobuhlungu nonya lapho abalingisi babecishe baqeqeshwe njengabadansi, babenohlobo oluthile lomzimba ngabo. Futhi empeleni, yingakho ngagcina eCanada, ngukuthi umbukiso engangikuwo wawuluhlobo lombukiso okhuluma izilimi eziningi, owamasiko amaningi owaya eYurophu, wahambela iYurophu, waya ePoland, weza eCanada, kwaba umbukiso wokuvakasha. Ngakho-ke ngathola iToronto futhi - indaba ende - kepha ngagcina ngiseToronto. Kepha umqondo wokuthi umzimba wami wokusebenza ubulokhu ukhona. Futhi sengikushintshe kusuka etiyetha kuya kwifilimu nakumabonakude.
Kepha ngihlala nginomzimba emzimbeni wami. Ngiqonde ukuthi, akwenziwa ngamabomu, kepha kukhona, ngoba kungokwemvelo ekuqeqeshweni kwami. Ngakho-ke noma ngabe kunobuso bami, noma ngabe kungama-eyeballs ami, noma ngabe kunjalo, uyazi, ngidlala isidalwa esifana ne-Three Finger Ijik elingafanele, noma Ukufa ku esingajwayelekile. Okubalulekile kimi ukuzivocavoca umzimba jikelele. Futhi ngalokho angisho, uyazi, njengokuzama nje ukuba mkhulu nokuba namandla nokuqina. Akunjalo. Cha, kukhona uhlobo lokujula kulo oluvela emzimbeni.
UKelly McNeely: Kungaphezulu kwenhlawulo ebonakalayo.
UJulian Richings: Yebo. Futhi izinto ezinjengethiyetha yendabuko, empeleni akuyona uhlobo engilwazi kahle, uyazi, umdlalo wendabuko wesiNgisi okhulunywayo. Akuyona into oyaziyo, lapho abalingiswa bemi khona baphuze itiye baxoxe futhi baxoxe ngemibono. Angilwazi kahle lolu hlobo lweshashalazi. Ama-horror nohlobo olukhulu lwamafilimu asebenzayo, afana Izingxenye ezisele, empeleni zingifanela kahle kakhulu.
UKelly McNeely: Ngakho-ke lokhu kungaba uhlobo lombuzo obanzi. Kepha yini kuwe injabulo enkulu kakhulu kanye / noma inselelo yokwenza?
UJulian Richings: Hawu, baba. Kuyingxenye yami, uyazi? Bekulokhu kunjalo. Ngicabanga ukuthi zombili, kuyingozi. Ngoba kufanele ube khona okwamanje, akunjalo? Kuyathakazelisa impela ekulandiseni le ndaba, kufanele ube yingxenye yokuthi ayikwazi ukuba yingxenye yobuchopho bakho obuhambayo, hheyi, ngikujabulela kakhulu ukuzulazula ngezinto zami. Noma, ngiyalawula, noma ngingubani? Kuyahlekisa, lelo zwi elisekhanda lakho alikwazi ukuba lapho, kufanele ube ngaphakathi kulo. Ngakho-ke ukuze ube njalo, kufanele ube sesimweni sokuba sengozini, ngicabanga, nokutholakala okwamanje.
Futhi lokho kunzima kakhulu. Empeleni kunzima kakhulu ukuba lula nokuvuleka nokuzenzakalela. Futhi-ke, ukuseshwa kwalokhu, kudinga ubulukhuni. Futhi kudinga isikhathi sokuphila okungakaze kube nhlobo ukunganaki, empeleni. Manje, angikufuni lokho. Ngicabanga ukuthi yindlela engiphila ngayo impilo yami. Ngingahle ngiphile impilo yami onyaweni lwami lwangaphambili. Ngihlala ngihamba, ngihlanyisa abantu ngoba angikwazi ukuthula, ngihlala ngilalela, ngiphendula.
Kepha kuyinjabulo yami enkulu ukuthi nginomuzwa wokuthi ngiyingxenye yokugeleza kwempilo. Kepha futhi kuyacindezela futhi, ngoba akukho ukuthula. Njengomlingisi, angikwazi ukuhlala phansi ngokuzethemba kwami. Angikwazi. Ngisho nangesikhathi se-COVID angikaze ngikwazi ukuhlala phansi ngibhale inoveli yami enhle noma ngibhale imibono yami, noma ngizinyawo zami zangaphambili ngilalele abanye abantu futhi ngikhombisa lokho abanginika khona. Ngiyethemba lokho kuyayiphendula. Kuzwakala sengathi kunobuhle obuncane, kepha yisimo sengqondo. Ngicabanga ukuthi yisimo sokuba khona engicabanga ukuthi kufanele uzame ukusigcina.
elingasebenzi Izingxenye isiyatholakala manje kuVOD, Digital, DVD, naku-Blu-ray
Noma yini kaJackson izotholakala kuVOD, Digital, DVD, naku-Blu-ray ngoJuni 15
Noma yini kaJacksonUJulian RichingsIzingxenye ezisele